Jacaylkii Xoogga Ahaa !! | shumis.net
Home » jaceyl » Jacaylkii Xoogga Ahaa !!
Jacaylkii Xoogga Ahaa !!
Xili galab ayaa DHIDI oo reer garowe ah u timid waxay ka gadatay gaas iyo kibriit madaama GAROWE korontadu joogto waqti yar oo xadidan! wayna iska laabtay galabtaas! DHUDI waa Garoob dhashay 2ilmood ninkeedi hore wuu furay kadib MARKUU KA DHARGAY (ka dhargida waa arin laga yaqaano GAROWE iyo QARDHO sababto ah waxay aminsanyihiin wax la yiraahda ARI BAAYE AA KAA DHARGAY)
waa bacdal maqrib waxa da’yay roob, waxa uu ahaa AWAYSOW kaligiis waxa usoo gashay DHUDI waxa ayna ka gadatay batari ay caawa warka BBC ku dhagaysato madaama reer GAROWE ay aminsanyihiin inay siyasiyiin wada yihiin warka BBC-du ma dhaafto!
batarigii markuu siiyay ayay ku tiri “waryaa xagee kasoo jeedaa?” wuuxu ugu jawabay “abaayo BAYDHABO JANAAY” waxay ugu jawabtay “oo maxaa magaladeena kasoo doontay?” AWAYSOW oo yaaban baa ku jawabay “abaayo garowe waa magaladayda waana ka shaqaysta ee roob baa da’ayee kasii xaroo” intay is xanaajisay bay tiri “laangaabyahow garowe qaxooti baa ku tahay” wayna ka tagtay!
AWAYSOW oo yaaban baa ku jawabay “abaayo garowe waa magaladayda waana ka shaqaysta ee roob baa da’ayee kasii xaroo” intay is xanaajisay bay tiri “laangaabyahow garowe qaxooti baa ku tahay” wayna ka tagtay!
Awaysow hoos buu iska dhahay ilaahay tan sharkeeda haku mootiyo. awaysow waxa uu u tagay saxibkiis oo reer garowe ahaa wixii dhacay ayuu u sheegay waxa uu saxibkiis ugu jawabay “kk ba’a waa caadi boowe laangaab waa tahay garowe-na kama aad soo jeedo oo sidaas baad qaxooti ku noqotay gabadhu aa saxantahay wax qalad ah kumaysan oran” awaysow shib ayaa kasoo hartay madaxiisa waa qarxi rabaa ninkii uu saxibka u haystay aaba sidaas kuleh waa iskaga soo tagyay.
dhanka kale DHUDI caawa ciilka iyo carada ay qabto waxa waaye sidee nin baydhabo ka yimid u dhahaa GAROWE waa magaladayda.
waa xili arooryo awaysow shaaxa iyo rootiga isaga u qaybiya ciyaalka xaafada sababtoo ah haduusan shaaxaas iyo rotigaas ku laalushin dukankiisa waa la jabsanaa!
Isla maalinkaas galabteeda waaba tan DHUDI oo dukaanka soo gashay awaysow naxdin tan xay ka rabtaa ayuu hoos isku dhahay!
waxay tiri “waryaa eelayahow kursi isii” waxa uu ku yiri “walashay meshaaan meel shaqo waaye meel la fariisto maahan ee maxa ka gadaa” DHUDI oo qaadan la’ hadalkiisa ayaa ku tiri “ari ma anigaa sidaas iila hadlaysa geedyahow dulliga ah, waxaas ka gudub horta adiga xaas ma leedahay?” awaysow aya ku jawabay “may abaayo xaas ma lihi” waxay tiri iyadoo markan is maskiininayso ileen waa naag laga soo dhargaye “eelayahow xumi numberkaaga ii qor waanu wada shakaysan doonaaye” awaysow waaba naxyay sababtoo ah wuxuu maqli jiray gabar reer garowe ah hadaad barato dukaankaaga waa kacaa “abayo fiiri aniga sheeko uma baahni waayo shaqada aa iga badan marka iga raali ahow”
dhudi oo caraysan baa xogaa horay u dhaqaaday oo intay albaabka istaagtay tiri “waryaa caqli lix saacyahow anigoo gabar reer garowe ah miya shekadeeda diidaysa” awaysow xoogaa naxariis aa gashay wuxuu is yiri gabadhan ha xumayn ee numberka u qor. waa isbartayn dhudi iyo awaysow. lkn dhibaatada ugu wayn waxa waaye isku sheeko maahan dhudi waxay rabtaa cid ugu shekaysa siyaasad, awaysow-na shukaansi iyo siyaasad xaa iska galay uu taaganyahay! waxyaabaha ugu badan uu ka bartay waxa ahayd “Dowlada puntland, nidaamka federalka waa xalka kaliya ee somaliya, puntland waa hooyada somaliya” wiilkii awaysow ahaaa SIYAASI rasmi ah ayaaba laga dhigay kk habeen habeenada kamid ah ayay marti qaad u sameesay
Habeen habeenada kamid ah ayay marti qaad u sameesay. awaysow waxa uu yimid gurigii dhudi isagoon maanta soo qadayn madaama uu islahaa martiqaad ayaa ku sugaayo wuxuuna filaayay hilib buskeeti ah, iyo CASHO habaysan markuu wax yar fadhiyay waaba tan dhudi oo saxan wayn oo bariis cadaan ah ku raran soo ag dhigtay! awaysow waa yabanyahay isla markiiba DHUDI waxay lasoo oroday caagad sadex le ah oo caano ARI ah oo dhanaanka ka batay bariiski ku dul shubtay. (ARI LAGA REESAY BARIIS CAANO LEH HADUU MAQLI JIRAY MAANNTA AWAYSOW BAY HAYSATA)
awaysow waa nin dhaqan xeerinayee bariiskii iyo caanihii dhanaanka ahaa gacmaha gashay laba jeer qaaday isagoon calalina daji isla markii ka far dhaqay! waxa bilaabatay sheeko iyo is waraysi sidii loo shekaysanayay ayaa DHUDI waxay tiri “CAASIMADA GAROWE waa ku ilbaxday” awaysow ayaa yiri “aniga waligay ilbax aan ahaa ee maxa aragtay abaayo?” DHUDI oo qoslaysa baa tiri “ari ba’a soo taad ka timid tuulada baydhabo ee dadkeedu tuugsadaan” (miyayba ogtahay in BAYDHABO janaay tahay caasimada afaraad ee jamhuriyada) awaysow oo gaajada haysa awgeed isleh warka soo gagabee ayaa yiri “BAYDHABO hadad marlee tagi lahayd garowe maba soo xasuusatayn” dhudi waaba ka carootay hadalkaas waxayna tiri “ari najisyahow xumi caasimada hanaga caayin” oo sii raacisay “waxyahow magaca xumi isa soo diyaari aanu is aroosayna isbuuca soo socda”
Awaysow naxdin wuxuu lasoo booday “aroos aa, aniga diyaar uma ahi walalay aroos” dhudi waxay ugu war celisay “waryaa waxaas shaqayn mayaan aniga caawa martiqaadka qarashka badan iga gashay waxan u sameyay inaynu arooskeena ka wada hadalno” awaysow oo markaan is calin waayay ayaa yiri “abaayo fiiri aniga bariis caano leh martiqaad ma u kasaayi, mida kale naag laba ciyaal leh aniga maba guursan karo, adiga oo sidaas u hadal adagna oo iska caytamayana kulama dagi karo inta yar ee aan kula joogo madaxa aaba i xanuuna ee waa baxaya nabaday” dhudi oo markan wajigeedi gaduud isku badalay ayaa tiri “i dhagayso waryaa hadaad garowe rabtid inaad sii joogto amarkayga qaado hadii kale dhimasho isku diyaari” awaysow oo markan cabssaday ayaa yiri sidatan “waa kasoo fakira sadex maalmood isii” waxay tiri “waayahay”.
Awaysow xaalkii ayaa ku xumaaday madama saxibkiis oo reer qalaafe ahaa ayaa naag dayn uu kulahaa shirqooshay oo markaas alshabaabnimo loogu toogtay garowe marka go’aan wuxuu qaatay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan isaga tago oo bosaso usii gudbo halkaasna kasii tahriibo! waxa uu u tagay saxiibkii axmaday oo isagana dukaan kulahaa garowe waxayna isku afgartayn inuu alaabta ku wareejiyo habeen madow uu alaabtii raray oo uu geeyay dukaankii axmaday.
Awaysow bosaso waa gaaray, wuxuuna uga sii gudbay Yemen, isagoo xilligana ku sugan dalka Sucuudiga halkaasi oo u ku guursaday gabar raali u ah.
AWAYSOW waa reer baydhabood waa nin furfuran oo bashaash iskana shaqaysta wuxuu kulahaa magaalada GAROWE xarunta gobolka Nugaal, Somaliya dukaan xafadeed! mar walba waa iska farxsanaa oo waji furan ayuu kusoo dhaweeyn jiray macamishiisa!
Title: Jacaylkii Xoogga Ahaa !!